Coolie No. 1(2020) | MM Movie Store
ရာဂြုးကူလီက ငယျငယျတုနျးက မမြှျောလငျ့ပဲ သူ့အမနေဲ့ ရထားဘူတာတဈခုမှာ ရှငျကှဲကှဲသှားခဲ့ပါတယျ။ဘူတာက လူတဈယောကျက သူ့ကို ကူလီထမျးပွီး ဘဝကို ပြျောပြှျောရှငျရှငျနဲ့ ရှဆေ့ကျဖို့ သငျကွားပေးခဲ့သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ သူကွီးလာတော့ ဘူတာမှာ လူတကာရဲ့ အထုပျတှကေိုသယျရငျး အလုပျလညျးကွိုးစားသလို ဉီးဆောငျနိုငျစှမျးလညျးရှိလတေော့ရာဂြုးကူလီ နံပါတျ ၁ ဆိုပွီး နာမညျကွီးနပေါတော့တယျ။မစ်စတာရိုဇာရီယိုဆိုတဲ့ လောဘကွီးသူဋ်ဌေးရဲ့ အိမျကိုလညျး ပုဏ်ဏားတဈယောကျကမင်ျဂလာကိစ်စကမျးလှမျးဖို့ သားရှငျမိသားစုနဲ့အတူ ရောကျလာတယျ။
ရိုဇာရီယိုက “အစားအသောကျပစ်စညျးဝယျရငျတောငျ လယောဉျနဲ့ထှကျဝယျတဲ့သူမြိုး၊နိုငျငံတဈနိုငျငံက ပိုကျဆံလိုရငျတောငျ သူ့အရှလေ့ကျလာဖွနျ့ရမယျ့သူမြိုးကိုပဲ သားမကျတျောနိုငျမယျ”လို့လလေုံးထှားလိုကျပါတယျ။ပုဏ်ဏားကွီးဟာ သူ့သကျတမျးတဈလြှောကျ ဒီလိုမြိုးမကွုံဘူးတော့အရမျးရှကျသှားတယျ…
ဒါ့ကွောငျ့ ဘဝငျလဟေပျနတေဲ့မိသားစုကို လကျစားခဖြေို့ လှနျစှာမှာ နိမျ့ကတြယျလို့ယူဆတဲ့ ရာဂြူးကူလီနံပါတျ ၁ ကို အကူအညီတောငျးပွီး ရှဇှေနျးကိုကျတဲ့သမီးတျောကို ရဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ…ကူလီသမားကို သူဌေးကွီးပုံစံဖွဈအောငျ ပုဏ်ဏားကွီးဘယျလိုကွိုးစားမလဲ…
သူတို့ဘယျလိုအကှကျခကြွမလဲ..အောငျမွငျနိုငျပါ့မလား….ဆိုတာကိုတော့…တျောတျောလေး ရယျရတဲ့ ဇာတျကားဖွဈလို့ Comedyကားကွိုကျသူမြား လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး ….
ရာဂျုးကူလီက ငယ်ငယ်တုန်းက မမျှော်လင့်ပဲ သူ့အမေနဲ့ ရထားဘူတာတစ်ခုမှာ ရှင်ကွဲကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဘူတာက လူတစ်ယောက်က သူ့ကို ကူလီထမ်းပြီး ဘဝကို ပျော်ပျှော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ သင်ကြားပေးခဲ့သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ သူကြီးလာတော့ ဘူတာမှာ လူတကာရဲ့ အထုပ်တွေကိုသယ်ရင်း အလုပ်လည်းကြိုးစားသလို ဉီးဆောင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိလေတော့ရာဂျုးကူလီ နံပါတ် ၁ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေပါတော့တယ်။မစ္စတာရိုဇာရီယိုဆိုတဲ့ လောဘကြီးသူဋ္ဌေးရဲ့ အိမ်ကိုလည်း ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်ကမင်္ဂလာကိစ္စကမ်းလှမ်းဖို့ သားရှင်မိသားစုနဲ့အတူ ရောက်လာတယ်။
ရိုဇာရီယိုက “အစားအသောက်ပစ္စည်းဝယ်ရင်တောင် လေယာဉ်နဲ့ထွက်ဝယ်တဲ့သူမျိုး၊နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ပိုက်ဆံလိုရင်တောင် သူ့အရှေ့လက်လာဖြန့်ရမယ့်သူမျိုးကိုပဲ သားမက်တော်နိုင်မယ်”လို့လေလုံးထွားလိုက်ပါတယ်။ပုဏ္ဏားကြီးဟာ သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးတော့အရမ်းရှက်သွားတယ်…
ဒါ့ကြောင့် ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့မိသားစုကို လက်စားချေဖို့ လွန်စွာမှာ နိမ့်ကျတယ်လို့ယူဆတဲ့ ရာဂျူးကူလီနံပါတ် ၁ ကို အကူအညီတောင်းပြီး ရွှေဇွန်းကိုက်တဲ့သမီးတော်ကို ရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်…ကူလီသမားကို သူဌေးကြီးပုံစံဖြစ်အောင် ပုဏ္ဏားကြီးဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ…
သူတို့ဘယ်လိုအကွက်ချကြမလဲ..အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား….ဆိုတာကိုတော့…တော်တော်လေး ရယ်ရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ Comedyကားကြိုက်သူများ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ….
(Dat Bu) Large Size ~ Download
(Dat Bu) Small Size ~ Download
Sherlock (Season 1,Episode 2) – The Blind Banker
Secretly, Greatly ( 2013 )